ठेकेदारको लापर्वाहीले सडक नबनेको भन्दै ढुङ्गागाढेमा जनप्रतिनिधिले कोदो रोपिदिए - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १४ श्रावण २०७८, बिहीबार १४:२३
गोरखा–आरुघाट सडक खण्डको ढुङ्गागाढे खण्डमा सवारी साधन घण्टौँ हिलोमा फस्ने गरेको छ । बिहिवार उक्त सडक तत्कला सहज बनाउन माग गर्दै जनप्रतिनिधि, स्थानीय र यातायात ब्यवशायीले बिरोध जनाए ।
ढुङ्गागाढे चोकमा भेला भएका उनीहरुले सडकमा कोदोको बिउ समेत रोपे । ‘ठेकेदारले काम गरेनन्, बिरोध स्वरुप कोदोको बिउ रोपेका हौँ’ गोरखा नगरपालिका ४ का अध्यक्ष रामशरण अधिकारीले भने ‘बिहिवार बेलुकी सम्म ग्राबेल राखेर सहज नबनाउने हो भने शुक्रवार जिल्ला प्रशासनमा धर्ना दिन्छौँ ।’
पटक–पटक सडक स्तोन्नतीको माग गर्दा समेत निर्माण कम्पनीले काममा चासो नदिएको र सरोकारवाला निकायले पनि ध्यान निदिएको गुनासो स्थानीयको छ ।
‘म हरेक दिन यहाँ केही घण्टा गाडी फसेर बस्नुपर्छ’ चालक निरज पाण्डेले भने ‘गाडी बिग्रिने डर उत्तिकै हुन्छ ।’ सडकमा यात्रा सहज नभएपछि यात्रुले पनि सास्ती भोग्न बाध्य छन् । आरुघाट १ मान्बु हिँडेका नबिन लामा उक्त बाटो भएर आउँदा जाँदा नै सास्ती भएको बताउँछन् ।
फिनामदेखि घ्याम्पेशाल खण्ड कालोपत्रे भएको छ । तर सदरमुकामदेखि कालोपत्रे सडकसम्म पुग्न सास्ती भोग्नुपर्छ ।
निर्माण जिम्मा लिने कम्पनीले सडक खण्ड निर्माण पुरा नहुँदा सम्म पनि उक्त खण्डमा नियमित सवारी चल्ने बनाउनुपर्छ । तर ब्यवशायीले हेलचेक्राई गरेका छन् । सडक वरपर घर भएकाहरुले पनि हिलाम्य सडकको कारण दुःख भोग्नु परेको बताएका छन् । पैदल यात्रुलाई पनि बाटो हिड्न सास्ती छ ।
गोरखा सदरमुकाम भएर आरुघाट, घ्याम्पेशाल, बुङ्कोट, बोर्लाङ, सोती, माछाखोला, ताकुकोट लगायत ठाउँमा सवारी साधन आउजाउ गर्छन । ग्रामिण भेगको मूख्य ब्यापारीक केन्द्र आरुघाट जाने उक्त सडक खण्डमा सवारी साधन आउजाउ बाक्लो हुन्छ ।
चार दशमलव ६ किलोमिटर सडक दुई वर्ष भित्र निर्माण सक्ने गरी ८ करोड ४७ लाखमा बानियाँ निर्माण सेवाले जिम्मा लिएको हो । सडकमा अहिले काम गर्ने मान्छे खासै देखिँदैनन् । ‘सडक नियमित सहज रुपमा सुचारु बनाउन निर्माण ब्यवशायीको दायित्व हो’ पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख दयाराम अधिकारीले भने ।
समय अवधी अझै बाँकी रहेको र वर्षातको कारण देखाउँदै अहिले काम नगरेको उनले बताए । ‘समय सम्म काम नगरेको भए कारवाही गर्न मिल्थ्यो, अझै समय एक वर्ष बाँकी छ’ उनले भने ।
निर्माण ब्यवशायीका साईड इन्चार्ज दिपेश खड्काले पहिले काम गरिएको र अहिले वर्षातका कारण काम प्रभावित भएको बताए । ‘ग्राबेल निकाल्न संभव नहुदा स्तरोन्नती गर्न नसकिएको बताउँदै उनले तत्काल सवारी चल्न सक्ने बनाउने बताए । ‘अहिले ३० प्रतिशत जति काम सकिएको छ’ उनले भने कालोपत्रेको काम वर्षात लागेकाले गर्न सकिएन, वर्षात रोकिएपछि सुरु हुन्छ ।’
सभामुख प्रकृति दवाडीले संसदमा रुलिङ सुरु गर्छिन् । सुरु भएलगत्तै सभासद सदीक्षा कट्टेलले सडक हिलाम्य